विश्वकै ध्यान खिच्न सफल यी पुस्तकालय
आधुनिक समयमा पढने शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । परम्परागत रुपमा पुस्तक पढने, पुस्तकालय धाउने र रटने शैली अचेल फेरिएको छ । प्रविधिको विकासले इ–माध्यम मार्फत पढने शैलीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । तर, विश्वमा यस्ता पुस्तकालयहरु छन् जसले पाठकलाई पुरानै शैलीमा पढन उत्प्रेरित गरेका मात्र छैनन कि त्यस्तो पठनीय वातावरण समेत उपलब्ध गर्दै आएका छन् ।
पेइखम लाइब्रेरी, लन्डन (यूके)
सन् २००० मा खोलिएको पेइखम पुस्तकालय विश्वमै चर्चित छ । यो पुस्तकालय खुलेपछि बेलायतमा लाइब्रेरीको पुनरुत्थान सुरु भएको मानिन्छ । विविध सामाजिक समस्या बीच पनि लन्डनको भित्रि सहरमा स्थापित यस पुस्तकालयले दैनिक हजारौं पाठकको ध्यान खिचेको छ । यो पुस्तकालय शीर्ष प्राथमिकतामा छ । पुस्तकालय खुलेको पहिलो वर्षमै पाँच लाख मानिस पुस्तकालय पुगेको रेकर्ड छ । विशेष सजावटका कारण यो पुस्तकालयले प्रतिष्ठित स्टर्लिंग पुरस्कार समेत जित्यो । एक विशाल उल्टो एल आकारमा निर्मित पुस्तकालयले स्थानीय ल्यान्डमार्क प्राप्त गर्यो । वास्तवमा यो एउटा हिप नाइट क्लब सावित भयो । र, पुस्तकालय यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सावित गर्यो । ।
साइक्लोजी लाइब्रेरी, फ्रि युनिभर्सिटी अफ बर्लिन
नर्मन फोस्टरले फ्री युनिभर्सिटी अफ बर्लिनमा स्थापना गरेको यो नयाँ र आधुनिक पुस्तकालय हो । उनले पढने संस्कृतिलाई जोगाउनका लागि यो पुस्तकालय निर्माण गरेका हुन् । उनको सोचाइ थियो कि मानिसहरू कहाँ पढ्न मन पराउँछन् ? कस्तो वातावरणमा पाठकको ध्यान एकाग्र हुन्छ ? पढनका लागि एउटा पाठकले चाहेको के–के हो ? यी सबै प्रश्नबाट उनले निष्कर्ष निकाले कि, एकान्त, शान्त र प्राकृतिक मनोरम युक्त वातावरण ।
अझ प्राकृतिक प्रकाशको खाँचो पर्ने उनको ठम्याई थियो । उनले कुनै व्यक्तिलाई रूखको छेउमा बसाएर सूर्य उदाएर तिर फर्केर पुस्तक पढिरहेको कल्पना गरेँ । अनि गोलो मानव खप्पर सम्झेँ यही तस्वीरलाई वास्तविकतामा उतारे र मानव मस्तिष्क आकारमै पुस्तकालय निर्माण गरे । सन् २००५ मा निर्माण गरिएको यो पुस्तकालय प्रकृतिको प्रतीक पनि हो । प्रकृतिक उर्जा प्रयोगमा आधारित यो पुस्तकालय बर्लिनको मस्तिष्कका रूपमा चिनिन्छ। पुस्तकालय बाहिर उनले लेखेका छन् ‘यो भवन बाहिरी संसारसँग काम गर्दैछ।’
प्रकाशित २३ चैत्र २0७४ , शुक्रबार | 2018-04-06 12:00:36